३३ केजी सुन प्रकरणमा परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौलाको आयो अत्यन्तै दुखको खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ३३ केजी सुन प्रकरणमा परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौलाको आयो अत्यन्तै दुखको खबर !
३३ केजी सुन प्रकरणमा परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौलाको आयो अत्यन्तै दुखको खबर !
admin April 22, 2018 समाचार	0
काठमाडौं । साढे ३३ केजी सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला पक्राउ परेका छन् ।प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन समितिले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो । निरौलाले गत २९ चैतमा अवकाश पाएका हुन् ।यस घटनामा जोडिएका करिब ३० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डीएसपी
मोहन थापाले पूर्व डीआईजी निरौलालाई पक्राउ गरी बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा राखिएको पुष्टि गरे । त्यसबाहेक आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार विमानस्थल प्रहरी प्रमुख रहेका वेला निरौला निरन्त सुन तस्करी गर्ने गिरोहसँग सम्पर्क रहेका थिए ।
बुवालाई ढाटेर गित गाउने अशोक दर्जि काठमाडौंमा स्टार बने -हेर्नुहोस भिडियो सहित
भर्खरै आयो यस्तो खबर !
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनकाे टावर ढल्यो!
Breaking News: दाङबाट अायो पत्याउनै नसकिने यस्तो लाजमर्दो दुःखद खबर
भारतमै अस्ताए यी नेपाली दम्पत्ती, नाबालक २ छोराहरुको यस्तो बि’चल्ली
कोहि नभएको बेलामा, घरमै परपुरुष बोलाएर रोमान्स गरेकै बेलामा श्रीमान आइपुगेपछि… हेर्नुहोस्
सम्पुर्ण छोरीहरुका लागि, २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढ्नुहोस